မြန်စံ keyboard layout Software ~ ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ
မြန်စံ keyboard layout Software
10/10/2012 03:05:00 PM Shwemantarlay Wai Yan No comments
ကျွန်တော်လည်း အခုတလော အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ဗျာ.. နေ့လည်တုန်းက ခဏလေးနားနေတုန်း mail စစ်ကြည့်လိုက်တော့ မေးထားတာလေးတစ်ခုတွေ့လို့ပါ. Myanmar2အတွက် keyman နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာလေးတစ်ခုကို မေးထားလို့ပါ။ ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းကျရင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်ဗျာ... အခုတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိသုံးနေတဲ့ မြန်စံ software လေးကို အသုံးပြုကြည့်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ .
အခုလို မေးထားတဲ့ မ သန္တာအောင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ.. အသေးစိတ် မရှင်းပြနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါဗျာ..
နောက်ပြီး အားလုံးကို တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်..အခု ကျွန်တော်ဆီ မေးချင်တာရှိရင် အကူအညီတောင်းချင်ရင် နောက်ထပ်အကောင့် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ shwemantarlaywaiyan@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်. သာမန်ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ gamemaster အကောင့်ကို ဆက်သွယ်ပါလို့ ပြောပါရစေ.. ဒါမှသာ ကျွန်တော်လည်း အကူအညီတောင်းထားတဲ့ စာတွေကို သေချဖတ်ဖြစ်မှာ ဖြစ်လို့ပါ. gamemaster အကောင့်က နေ့စဉ်လိုလို အဖွဲ့တွေက mail ၀င်တာများတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်လေကျရင် မတွေ့မိတဲ့အတွက် မဖြေနိုင်တာတွေ ဖြစ်လို့ပါ. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
Myansan Keyboard Layout Download Link
install လုပ်နည်းစာအုပ် တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်. အသုံးပြုနည်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ....
Posted in: Softwares, Unicode
Mobile Guide Journal Issue 73